Vacance: Ny tokony hatao - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Vacance: Ny tokony hatao
Vacance: Ny tokony hatao
by Alpha world on 09 h 01 in Société
Maro ny olona mametraka fanontaniana amin’izay tokony hatao mandritra ny fialan-tsasatra na ny grande vacance. Ny fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao mantsy raha amin’ny zareo vahiny no anararaotana mianatra momba ny zavakanto. Anisan’ireny ny fianarana mihira, manao hosodoko, mianatra mitendry sns.
Raha misy ny fahafaha-manao izany, azo itarafana ny talenta miafin’ny zaza iray ny fampanaovana azy izay kanto mba iriny. Matetika mantsy, tratra aoriana hatrany isika Malagasy vao mahatsapa fa ilaina ny fianarana izany zavatra rehetra izany.
Tombony lehibe ho an’ny vahiny ny fananana sekoly maro fampianarana momba ny zava-kanto ahafaha-misafidy. Ny antsika, ny kely ananana no ifaliana ka dia hararaoty e.
By Alpha world at 09 h 01